आफ्नै अवस्था देख्दा अहिल्यै मरौँ जस्तो लाग्छ ! | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
आफ्नै अवस्था देख्दा अहिल्यै मरौँ जस्तो लाग्छ !
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १७:३१
कोरोना महामारी नआएको भए यतिखेर म होटेलको भान्सामा परिकार पकाइरहेको हुन्थेँ । सेतो ह्याट र एप्रोनमा सजिएर ग्राहकको इच्छा अनुसारका मेनु तयार गरिरहेको हुन्थेँ । तर कोरोना महामारीले जीवन नै फेर्‍यो ।
सयौँ मानिसलाई खाना खुवाउने मान्छे म अहिले आफै खुलामञ्चमा खाना खान धाइरहेको छु । आफै मागेर पेट भर्दै छु ।
मेरो घर काभ्रे पाँचखाल हो । नाम सञ्जीव राई । मेरो कोठा थियो वसन्तपुरमा । बौद्धको थकाली भान्सा घरमा कुकको जागिर पनि थियो । लकडाउनसँगै काम खोसियो । बेरोजगार भएँ । चैतमा पाएको अलिकति तलबले कोठा भाडा तिरेँ ।
आम्दानी रोकिएपछि कोठा भाडा तिर्न सकिएन । कोठामा खानेकुरा पनि सकियो । लकडाउनमा घर जाने गाडी पाएपछि घर गएँ । १ असारमा लकडाउन खुलेपछि काम पाइएला भन्ने आशले काठमाडौँ फर्किएँ । तर काम पाउनु त कता हो कता भात खान पनि सडकमा आउनुपर्‍यो ।
तीन महिना भयो कोठा भाडा तिर्न नसकेको । कोठा भाडा तिर्न नसकेपछि घरभेटीले कोठामा ताल्चा लगाइदियो । बस्ने ठाउँ कतै नभएपछि म आजभोलि सडकमै बास बस्न थालेको छु । मैले घरबेटीलाई भनेको छु ‘दुई महिना जति पर्खिनु, सामान कसैलाई नदिनु, म जसरी पनि तिर्छु ।‘
३० वर्षभन्दा बढी समय भयो कुकको काम गरेको । जीवनमा यसरी मागेर खानुपर्ला भन्ने त सोचेकै थिइनँ । के भयो जीवनमा ? यही हातले कतिलाई खाना पकाएर खुवाएको हुँ । आज मेरो हालत यस्तो भयो । गरिखाऊँ कि मरिजाऊँ भयो ।
जागिर खोज्न विभिन्न ठाउँ गएको हुँ । तर सबै ठाउँमा प्याक छ भने । यस्तो फोहोरी हालतमा देखेपछि कसैले नपत्याउने रहेछन् । २७ साउनमा हृदय घातका कारण दिदीको मृत्यु भयो । दिदी काठामाडौंमा बस्थिन् । घरभेटीले जफत गरेको कोठामा मेरो दिदीले बर्थ डे गिफ्ट दिनुभएको कालो कोट, पाइन्ट छ । मलाई केही चाहिएन दिदीले दिएको त्यो सामान निकाल्न पाएँ भने मलाई कोठा पनि चाहिँदैन ।
पाँचखालमा मेरा तीन भाइ छन् । गाउँमा पनि आर्थिक अवस्था निको छैन । घर गएर पनि के गर्नु, उता उस्तै हालत छ । झन् साह्रो छ । काठमाडौँमा खाना नपाएर गाउँ आएको भन्ने थाहा पाएपछि समाजले झन् के भन्ला ? यहाँ खाना खान नपाएको कुरा गाउँमा, घरमा कसैलाई भन्यो भने आफ्नै खिल्ली उड्छ ।
लामो समय सडकको वास हुँदा आँखा सुन्निँदो रहेछ । जिउ गल्दो रहेछ । अनुहार पनि सुन्निँदो रहेछ । अनि मान्छेले जड्याहा भन्छन् । एक छाक भात खान नपाएर सडकमा आएको मान्छेलाई कसैले जड्याहा भनेर बोलाउँदा त अहिल्यै मरौँ कि जस्तो हुन्छ ।
यस्तो दिन आउला भन्ने कहिले सोंचेको थिईन, यसरी मागेर खानु पर्ला जस्तो कहिल्यै लागेको थिएन । कुनै समय यहाँ माग्न बसेका मान्छेलाई पनि एक/दुई रुपैयाँ दिएको ज्यान यही हो, आज आफैँ भिखारी भएँ !
जागिर खाँदा कमाएको पैसाले जोडेको एउटा मोबाइल छ मसँग । केही सिप चलेन भने यही मोबाइल भए पनि बेच्छु । भेटेकोहरुलाई केही काम खोज्दिनुहोस् न भन्छु तर खै के हुन्छ अब । काम पाइयो भने त म जसरी पनि कोठा उकास्छु ।
यो कथा ९ असोजमा सञ्जीव राईसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर सागर चन्दले लेख्नुभएको हो।
**उनको बारेमा नयाँ पत्रिकामा पनि समाचार आएपछि उनले कीर्तिपुरको एक रेष्टुरेष्टमा कुकको रोजगारी पाए ।
सपनाका आकार र फिक्का खुसी
२७ असार २०७७, शनिबार १४:१७
कोरोना सँगै अघि बढ्दै
७ मंसिर २०७७, आईतवार १२:३१
भावना पुलामी मगर